Iiran Oo U Digtay Dalal Carbeed, Isreal Cabsi Wajahday , Yaa Ka Dambeeya Dilkii Khabiirka Nugleerka
December 1, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 0
Wasaaradda arimaha dibada Iiraan ayaa mar kale si kulul ugu fal celisay in ay jawaab xanuun badan ay ka bixineyso shirqoolkii looga qaarijiyay qabiirkii dhanka nugleerka Mohsen Fakhrizadeh, oo ay aad u jeclaayeen madaxda dalkaas kuna geeriyooday weerar abaabulan oo lagu qaaday, kaas oo la rumeysan yaahy in ay dalal badan oo ka walaacsan awooda Iiran ee sii kordhaysa ay ka dambeyeen.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arimaha Iiraan ee Saed Khadeb ayaa dhinac kale waxa uu tiilmaamay in uu jiro dal carbeed oo aan canbaareyn dilkii Mohsen Fakhrizadeh halka dhamaan khaliijka iyo wadamo reer galbeed ah ay ka fal celiyeen dhacadaas.
Mar uu ka hadlayay mowqifka wadamada Baxreyn iyo Imaaraadka ee dhacadaas waxa uu afjaheeynka wasaradada arimaha dibada Iiraan yiri ” waxaan wadamada carbeed ee cadeeystay xariirkooda Isr`al u sheegnay in Iiraan si adag uga jawaabi doonto caga jugleyn waliba oo ku timaada balse haatan jawabteena kuma bixineyno kaliya shaki aan qabno balse waxaan sugeynaa inta baaritaanada ay ka dhamaanayaan”.
Sidoo kale madaxweynaha Iiraan Hassan Ruuxaani ayaa balan ku qaaday in waqtiga ku haboon ay jawaab cad ka bixin doonaan dilka khabiirkooda Mohsen Fakhrizadeh kaasi oo weerar hubeysan oo lagu qaaday gaarigiisa lagu qaraajiyay
Inkastoo Iiraan weli aysan shaacin eedda dhinacyada ay ku tuhmuayaan arintaas hadana saxaafadda Iiraan qaarkood ayaa qoraya in falkaas ay si wada jir ah ugu lug leeyihiin Mareykanka , Sacuudiga iyo Isreal.
Sida haatan uu qorayo bogga Middle East Eye Iiraan waxa ay Imaaraadka u direen farriin ah in dharbaaxo milateri ay ku dhufanayaan waliba ay toos ula xariireen maamulka sare ee Imaaraadka xili arintaas ay timid waqti Imaaraadka ay canbaareeyeen dilkaas.
Sida ay tilmaamayana quburada dhanka amaanka ah , Iiraan ayaa la filayaa in jawaab nooca ay noqotaba in ay ka bixinayaan dilkaas xilli Isreal ay dadkeeda jooga Imaaradka iyo Baxreyn uga digtay weeraro lala beegsaan karo.